Tallaalka loo qaadanayo covid-19 gobolka Västra Götaland gudihiisa
Tallaalada loo qaato covid-19 gobolka Götaland gudihiisa
Waxaan hadda u isticmaalnaa labo tallaal hawlaha tallaalka: Comirnaty oo ka timid Pfizer/BioNTech ama Spikewax oo ka timid Moderna bay qaadanayaan dhammaan dadka la tallaali doono. Waxaa muddo dheer badnaa tallaalka Pfizer/BioNTechs ka yimid Iswiidhan gudaheeda laakiin hadda waxaa kordhay tallaalka ka imaanaya Moderna. Labada tallaalba waxaa laga isticmaalaa waddamo badan waxaana Iswiidhan gudaheeda laga isticmaalayay laga soo bilaabo diisambar 2020.
Tallaaladu waxay ku dhisan yihiin waxa loogu yeero tallaalka mRNA. Waa la isku hubaa, waxaa laga helayaa diffaac fiican waana in wakhti is le´eg u dhexeeyo labada jeer ee tallaalka la qaadanayo.
Kasii akhri tallaalka loo qaato covid-19 bogga Hey´adda caafimaadka dadwaynaha
Adeeg telefoon turjumaan leh
Gobolka Västra Götalandsregionen wuxuu leeyahay adeeg telefoon oo looga warbixinayo tallaalka. Waa isla warbixinta ku jirta 1177.se. Adeegga waxaa lagu heli karaa af-carabi, af-beershi iyo af-somali. Taas cagsigeeda kaama caawinayo inaad ballan qabsatid ama lagaga jawaabo su´aalo caafimaad.
Telefoon lambar: 010-473 94 30. Wakhtiyada uu furan yahay: 7-16.
Af carabi: 011-473 00 22
Af beershi: 011-473 00 23
Af somali: 011-473 00 24